के अल्कोहलको सेवनले शरीरलाई फाइदा गर्छ ? – Nepali Health
२०७५ भदौ ३ गते ११:४७ मा प्रकाशित
एजेन्सी । अल्कोहल प्रयोगको बारेमा मानिसहरुमा विभिन्न खालका धारणा पाइन्छ । कसैले अल्कोहल स्वस्थ शरीरका लागि हानिकारक पदार्थको रुपमा औल्याएका छन्, कसैले यसको ठिक्क प्रयोग शरीरका लागि लाभदायक हुने दावी गरेका छन् । बास्तविकता के हो त ?
बिमस्टेक सम्मेलनमा आउने पाहुँनाहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा यसरी मिलाइदै छ
‘बिरामी र स्वास्थ्य सेवाबीचको दुरी कम गर्ने’ डकनक एप्लिकेशन सञ्चालनमा